वडा अध्यक्षको नयाँ नयाँ आयाम - AahaSanchar
Home आहा बिचार वडा अध्यक्षको नयाँ नयाँ आयाम
वडा अध्यक्षको नयाँ नयाँ आयाम
रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिका स्याँला खदी वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष देव बहादुर घर्ति । उहाँ वडा अध्यक्ष भैसकेपछी साँच्चिनै एक नम्वर वडाले विकासको रुपमा मुहार फेरेको छ । उहाँले सामाजिक काम र अन्य ब्यक्तिगत कामहरु गरिरहनु हुन्थ्यो । उहाँले साविक स्याँलाखदी गाविस र हाल आठविसकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ मा २०६० साल एकदमै आधुनिकी काष्ट उद्योग सञ्चालन गर्नु भई त्यति विकट क्षेत्रमा उहाँले राम्रो फस्टाउदो उद्योग खोलेर उहाँ त्यसैमा सन्तुष्टी हुनु भएको थियो । पार्टी प्रतिको चासो पनी निकै बढेको थियो । र त्यसपछी उहाँले सामाजिक कार्य गर्दा कुनै पनी मनमा स्वार्थ नलिई काम गरेको कारणले
त्यहाँको धेरै वासिन्दाहरुको मन मुटुमा वस्न सफल हुनु भएको हो ।
सवैले उहाँलाई आदार गर्दथे । उहाँ सवै जनालाई नम्र बोली र नम्र ब्यवहार गरी आफ्नो बनाउनु हुन्थ्यो । अनी उहाँसँग बोली मात्र मिठो होइन मन तन सबै मिठो थियो । जव २०७२ सालमा स्थानीयतह निर्वाचन आयो । त्यसपछी उहाँ जनताको एउटा साँच्चिकै असल प्रतिनिधी बन्न पुग्नु भयो । उहाँलाई वडा अध्यक्ष हुनुमा कुनै पनी चासो थिएन । सामाजिक कार्यमा त उहाँ पहिलेदेखि लागी सक्नु भएको थियो । राजनिती प्रती उहाँले पहिले नै चासो राख्नु भएको थियो । जनताको मनमा उहाँ पहिलेनै बसीसक्नु भएको थियो । जब चुनाव आइसकेपछी आफु प्रतिनीधी हुन उहाँले चुनाबको लागि निकै दौडधुप गर्नु भएन । तर पनी जनताको चाहाना र आर्शिबादलाई बुझि उहाँले वडा अध्यक्षको टिकट पाउनु भयो । विकाशको अभावमा अन्धकारमा बस्नु परेको बासिन्दाहरुलाई उहाँले साँच्चिकै नै उर्जा थपीदिनु भएको छ । कति आनन्दको कुरा हो जसमा जनताले गुनासो केहि पनी छैन । गुनासो भएता पनी उहाँले गल्ती स्वीकार गरी निरन्तर अगाडि बढिरहनु हुन्छ । त्यो आफ्नो स्वार्थको नभएर सामाजिक कार्यमा दिनरातै खटिएको देखिन्छ ।
उहाँलाई धैरै जसो जनताले इमान्दारी जनप्रतिनिधी भनी बुझेका छन । उहाँलाई साच्चिनै जनताले मनमुटु दिएर जिताएको आभास उहाँले गर्नु हुन्छ । कती आनन्दको कुरा असल कामको असल फल भनेझै जनताको मन जिती सकेपछी पनी उहाँमा स्वार्थ पना देखीएको छैन । उहाँले आफु निर्वाचित प्रतिनिधी भएको समय देखी आउने बर्षहरुमा हारजितमा हार्नु परोस तर मैले सामाजिक काममा आफ्नो प्राण रहेसम्म गर्ने बताउनु हुन्छ । पाँच बर्षँ सम्म त मैले गर्ने कार्यभार होला, त्यहाँ बाट पछी म भन्दा पनी राम्रो काम गर्ने सामाजिक ब्यक्तित्वहरु जन्मिनु भयो भने यात उहाँहरु कसैलाई यो ठाँउमा पुग्ने चाहाना छ भने उहाँले त्यस्तो ब्यक्तिलाई जनताको लागी केही गर्नु पर्छ, सामाजिक कार्यमा निरन्तर लागीरहेको हुनु पर्छ र जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ त्यो ब्यक्तिनै यो ठाँउमा पुग्न सक्छ भन्नु हुन्छ । फेरी पाँच वर्ष पछी सवै सामाजिक कार्यभारहरुलाई लथालिङग बनाएर छोड्ने चाहाना नभएको उहाँ बताउनु हुन्छ । अनी उहाँ प्रतिनिधी हुनु भन्दा पहिलेनै बाल्यकाल देखी जवान अवस्था हुदा सम्म गरेका लोप लाग्दा कामहरु उहाँ निकै गरिवी परिवारमा जन्मनु भएको थियो । चुनाव हुनु भन्दा अगाडीका कामहरु कृषि पेशा गर्नु भयो र उहाँले त्यहाँका आलु , स्याउहरु स्थानीय साविकको स्यालाखदी गाविसभरिमा ढुवानी गरी विक्रीवितरण गर्नु भयो । अझ अर्को कुरा निकै पिछडीएको स्याँलाखदीमा पहिले २०५५ सालमा उहाँले दलित बस्ती लगाएत आफुुसँगसँगै अंघि बढौँ र जातित्व विभेद हटाउन सीपै नभएको बेलामा सदरमुकाम खलँगामा आई कपडा सिलाउने मेसिन किनी लगी आफैले कल्पना गरेर कपडा सिलाउन सिक्नु भयो । विस्तारै पुरै त्यहाँका वासिन्दाहरुले च्यातिएका कपडाहरु सिलाउन लगाएर ज्याला दिने काम गथ्र्ये ।
यो काम जनजातीहरु मध्य साविक स्याँलाखदी गाविसको पहिलो कपडा सिलाउने जनजातीको रुपमा चिनीनु भएको थियो । सँगसँगै सामाजिक कार्य लाई पनी निरन्तरता दिइरहनु भएको थियो । अनि त्यसपछी त्यहाँका जनता अँध्यारो रातमा बस्न बाध्य हुने वासिन्दाहरुको लागी अँध्यारो मुक्त बनाउने उहाँले आफ्नो काष्ट उद्योगबाट डाइनामा जडान गरी विद्युत उत्पादन गरि त्यहाँको पुरै गाँउलाई नै अन्धकार बाट उज्यालो बनाउनु भयो । र त्यसमा पनी निकै आर्थिक उन्नती भएको थियो । र अर्को कुरा झनै अच्चम्मको कुरा यो छकि उहाँले कलाकारिता गरिरहनु भएको छ । र उहाँले साँगितिक एल्वम पनी निकाल्नु भएको छ । साथमा उहाँका क्याराम्रो रुकुमेली कान्छो, वाईफाई वाला डिल्क्स गाडी, मेरो प्यारो आठविसकोट, लगाएतका दर्जनौ गितहरु निकाली सक्नु भएको छ । र अझै पनी नयाँ गीत र त्यसको भिडियो सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ । उहाँका यी सवै कामहरु निकै स्मरणीय छन अनी त्यसपछी उहाँ २०७३ मा जनप्रतिनिधी भैसके पश्चात उहाँले गरेका कार्यहरु पनि निकै रमाइला छन र खुशी लाग्दा पनी छन । आफ्नो समुदायमा रहेको वासिन्दाहरु खाने पानी नपाएर प्राय २ घण्टाको बाटो हिडेर पानी बोक्नु पर्ने ठाँउका बासिन्दाहरुलाई आजभोली प्रत्येक टोल टोलमा पानीको धारा समेत ल्याइदिनु भएको छ । यस्तै बाटोहरुको पनी निकै जोखीमपुर्ण यात्रा गर्नु पर्नेमा आजभोली एक दमै सहज बनेको छ । गोरेटो बाटोहरु सुधारिएका छन । त्यहाँका बासिन्दाहरु इन्टरनेटको पहुँच बाट निकै टाढा हुदा उहाँले इन्टरनेको ब्यबस्था पनी गरिदिनु भएको छ ।
विगतहरुमा इन्टरनेटको त कुरै छोडौँ राम्रो सँग फोन गर्न प्रयाप्त फोनको ब्यवस्था थिएन । अहिले त्यहाँँका बासिन्दाहरु सञ्चार पहुँचमा रहेका छन । विकाशको क्रममा उहाँलाई आठविसकोट नगरपालीकाको कार्यालय बाट एक इमान्दारी सक्रिय अध्यक्ष पनि बन्नु भएको छ । वडा नम्बर एकमा मात्र नभई आठविसकोट नगरपालिकाका १४ वटा वडाका लागी खुशीको कुरा हो । सवै १४ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरुले उहाँको जस्तै निस्वार्थ भावले कार्य गर्ने हो भने साँच्चिकै आठविसकोट नगरपालिकाले विकाशको रुपमा मुहार फेर्ने थियो की ?
Previous articleलद्यु उद्यम बजारीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया
Next articleआहा सञ्चार साप्ताहिक रुकुम बर्ष ७, अंक ५, असार १८ २०७६
साँखमा होमस्टे तालिम
आहा सञ्चार साप्ताहिक रुकुम बर्ष ६, अंक ३६, चैत १३ २०७५
बिहेका लागि मंसिर नै कुर्नु पर्छर ?
aahasanchar - December 6, 2018
aahasanchar - August 24, 2019